सल्यानमा बिषादी परिक्षण प्रयोगशाला स्थापना – Online Jagaran
सल्यानमा बिषादी परिक्षण प्रयोगशाला स्थापना
१० पुष २०७६, बिहीबार ०६:४१ December 26, 2019 जागरण
सल्यान, १० पुष (रेडियो राप्ती) । सल्यानमा बिषादी परिक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने तयारी गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा जिल्लाको कपुरकोट गाउपालिका ३ कपुरकोटमा बिषादी परिक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्न लागिएको हो ।
जसको लागी गत आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ को बजेट बाट कपुरकोटमा बिषादी परिक्षण प्रयोगशाला भवन निर्माण गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारको करिब ३८ लाख रुपैँयामा भवन निर्माण गरिएको छ । कृर्षि उपज बजार सञ्चालक समिती कपुरकोटले ३८ लाख ८२ हजार ७१ रुपैँयामा बिषादी प्रयोगशाला भवन निर्माण गरेको कृषि बिकास कार्यालय सल्यानले जनाएको छ ।
कार्यालयका सुचना अधिकारी रेशम कुमार बस्नेतले गत आर्थिक बर्षमा भवन निर्माण गरिएको र यस बर्ष देखी सञ्चालनमा आउने जानकारी दिनुभएको छ । अब विषदीयुक्त तरकारी आयात र निर्यात गर्दा चेकजाँच गरिने छ ।
जाजरकोटको जुनिचाँदे गाउँपालिकाको स्थायी केन्द्र कहिले टुङ्गीन्छ ? अध्यको भनाई सुन्नुहोस अडियोमा….
जनताको आवाजः प्रशासनसँगै जनता पनि कडा भएमात्रै भ्रष्ट्राचार कम गर्न सकिन्छ
२६ असार २०७५, मंगलवार १४:५१ July 10, 2018 जागरण